တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရာသီဥတုလေးခုအတွင်း ဝေဟင်မြင်ကွင်း (ဆောင်းရာသီ) - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဒေသအသီးသီး၌ ထူးခြားသော ရာသီဥတုလေးခု တွေ့ကြုံခဲ့ပြီး ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲက နွေးထွေး၍ တောက်ပသော အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့် ဆောင်ကြဉ်းပေးလျက်ရှိသည်။ဆင်ဟွာသတင်းဌာန၏ ဓာတ်ပုံဆရာများက လှပသော တရုတ်နိုင်ငံရှိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ထူးခြားသော ရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်းရာသီ ဆီးနှင်းများမှ နွေဦးပန်းကလေးများ၊ နွေရာသီ သဘာဝပေါက်ပင်များနှင့် ဆောင်းဦးရာသီ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန်အထိ ဒရုန်းများဖြင့် အမိအရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း မယုံနိုင်လောက်ဖွယ် ဝေဟင်မြင်ကွင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံများတွင် မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အအေးဆုံးရာသီဖြစ်သော ဆောင်းရာသီက သစ်ပင်များနှင့် လမ်းများအား နူးညံ့သော အဖြူရောင်ခြုံစောင်သဖွယ် လွှမ်းခြုံထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ (Xinhua)
Fly over four seasons in China 2021: Winter
BEIJING, Dec. 24 (Xinhua) — Most parts of China see the distinct four seasons. During the year, the change in seasons bringsafantastic variety of warm and vivid colors.
With drones being their wings, Xinhua photographers capture the fantastic seasonal changes during the year 2021 in beautiful China, from winter snowfall to spring flowers, summer vegetation, and autumn harvest.
Follow Xinhua photographers to review incredible aerial scenes captured in 2021.
Winter, the coldest season of the year, wrapping the trees and streets inasoft blanket of pure white.
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သသမ္မတဟောင်း ပတ်ဂွမ်ဟေးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြု